सीरीज LLC / सीमित देयता कम्पनी बुझ्ने
सीरीज LLC को बुझन
एक सीरीज LLC के हो?
A श्रृंखला LLC एक सीमित देयता कम्पनी हो जहाँ प्रत्येक श्रृंखलाले दायित्व सुरक्षा प्रयोजनों को लागि एक अलग LLC को रूप मा कार्य गर्दछ। यो एक कैबिनेटको समान छ जुन धेरै क्यूबी छेद छ। एक श्रृंखला विरुद्ध एक मुकदमाले अरूलाई असर गर्दैन। रियल एस्टेट लगानीकर्ताहरूले प्राय: उनीहरूको प्रयोग गर्छन् ताकि प्रत्येक श्रृंखलाले फरक सम्पत्ति पाउँछ। गुणहरूको एक मुकदमा, उदाहरणका लागि, अरूलाई बेवास्ता गर्दैन।
यो नियमित LLC जस्तै बनाइएको छ, बाहेक यसको गठनको विशेषतया विशेष रूपमा राज्य हुनुपर्छ जसले यसलाई श्रृंखला बनाउनको लागि अधिकृत छ। शुरुआती LLC कहिलेकाहीं मास्टर LLC, बेस LLC, छाता LLC, वा आमाबाबु LLC को रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यो श्रृंखलाले सिर्जना गर्दछ पनि विभिन्न नामहरूद्वारा जान सक्छ। तिनीहरूलाई उद्योगमा कोशिकाहरू, कन्टेनरहरू, विभाजनहरू, सहायकहरू, वा एकाइका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। एकपटक शुरुआती मास्टर LLC सिर्जना भएपछि, यो आवश्यक उत्पन्न भएको अतिरिक्त श्रृंखला सिर्जना गर्न सक्छ।
सुरुमा 1996 मा डेलावेयर मा स्थापित, सीरीज LLC (SLLC), जस्तो, अझै सम्म, एक सानो ज्ञात छ सम्पत्ति संरक्षण साधन। डेरावेयर को बाहिर केवल एक मुट्ठी को राज्य आफ्नो जिल्ला क्षेत्र मा SLLCs को कानूनी स्थापना को अनुमति दिछन। यी हुन्: अलबामा, इलिनोइस, आयोवा, कान्सास, मिसौरी, मन्टाना, नेवाडा, ओकेलाहोमा, टेनेसी, टेक्सास, उटाह र वाशिंगटन जिल्ला। क्यालिफोर्नियाले एसएलसीएलको एक मात्र दृश्यात्मक अवस्था छ। यसमा श्रृंखला LLC को स्थापना को प्रावधान छैन।
यद्यपि, एसएलसीले अर्को राज्यमा क्यालिफोर्नियामा सञ्चालन गर्न को लागी अनुमति दिएको छ, उनीहरूलाई विदेशी संस्थाको रूपमा दर्ता गराउने अनुमति दिन्छ। यद्यपि एक सीरीज LLC एकाधिक कम्पनीहरू स्थापना गर्न समान छ, यो एक संरचना प्रदान गर्दछ जुन प्रायः व्यवस्थित र सजिलो गर्न सजिलो हुन्छ। कुनै पनि सम्पत्ति संरक्षण उपकरणको रूपमा, SLLC फायदे र हानि छ। अन्तिम निर्णय गर्नु अघि तपाईंको विशेष व्यवसाय परिस्थितिको लागि विभिन्न विकल्पहरू अन्वेषण गर्न सधैं राम्रो छ।
यो मास्टर LLC एक सञ्चालन सम्झौता उत्पन्न गर्दछ जुन सीरीज को लागि आधार परिचालन नियमहरु लाई स्थापित गर्दछ। यद्यपि, यो अपरेसन सम्झौता प्रत्येक श्रृंखलाको लागि यसको विशिष्ट अपरेसनका लागि अनुकूलित नियमहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। मास्टर LLC ले एकपटक गठनको लेख फाइल गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि प्रत्येक अतिरिक्त श्रृंखला परिचालन सम्झौतामा निर्दिष्ट आन्तरिक मन्त्रिपरिषदबाट उत्पन्न गरिनेछ, वा अधिकार क्षेत्रको आधारमा सार्वजनिक फाइलहरू अलग गर्नुहोस्।
प्रत्येक श्रृंखला यसको आफ्नै नाम, बैंक खाताहरू, र लेखा पुस्तकहरू र रेकर्डहरूसँग एक अलग इकाईको रूपमा सञ्चालन गर्दछ। तिनीहरूसँग विभिन्न सदस्यहरू र प्रबन्धकहरू हुन सक्छन्, जसका अधिकार र दायित्वहरू सामान्यतया श्रृंखलाबाट श्रृंखलामा भिन्न हुन्छन्। प्रत्येक श्रृंखलाले आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दछ जसमा ठेकाहरूमा प्रवेश र गुणहरूमा शीर्षकहरू राख्ने गर्दछ। प्रत्येक श्रृंखला द्वारा स्वामित्व वाला सम्पत्ति अलग र अलग अलग श्रृंखला को अंतर्गत एक नै मालिक LLC को स्वामित्व वाला सम्पत्ति देखि अलग छ। यसको कारण, प्रत्येक सीरीजलाई अर्को श्रृंखला द्वारा खर्च हुने दायित्वहरूबाट सुरक्षित गरिएको छ। एक सीरीज LLC प्रत्येक सम्पत्ति को लागी अलग LLC स्थापित गर्नु भन्दा कम लागत बिना उत्कृष्ट सम्पत्ति दायित्व संरक्षण प्रदान गर्दछ।
सीरीज LLC बनाम होल्डिंग कम्पनी
श्रृंखला LLC को निर्माण गर्नु भन्दा पहिले, व्यवसायहरूले प्राय: सम्पत्तिहरू र दायित्वहरू सीमित गर्न कम्पनीहरूलाई पक्र्याउँथे। यो धेरै LLC को गठन आवश्यक छ। प्रत्येक LLC एक अलग सेट स्वामित्व वा सम्पत्ति को समूह बनाइन्छ, अन्य LLC मा आयोजित सम्पत्ति देखि अलग। प्रत्येक LLC उनीहरूको लागी कुनै पनि दायित्वको लागि मात्र जिम्मेवार हुनेछ। त्यसपछि यी व्यक्तिगत LLCहरू एक होल्डिङ कम्पनी अन्तर्गत राखिनेछ। A होल्डिंग कम्पनी सक्रिय रूपमा व्यापारमा संलग्न छैन। यसको नामले सुझाव दिन्छ, यसले मात्र केहि चीजको जमीन, घर वा वाहनहरू राख्छ। यस अवस्थामा, यो LLC को समूह छ कि प्रत्येक मा बारी मा एक विशिष्ट सम्पत्ति मा घर। प्रत्येक पटक एक व्यवसाय मालिकले होल्डिंग कम्पनी अन्तर्गत सम्पत्ति राख्न चाहन्छ, एक फरक LLC सिर्जना गर्नुपर्छ।
सी सीरीज LLC एक अधिक कुशल संरचना हो। यो धेरै LLC को सट्टा मात्र एक मास्टर LLC को सेटअप गर्न आवश्यक छ। केही राज्यहरूमा सीरीज LLC पहिचान गर्दछ, केवल मास्टर LLC गठन र वार्षिक रिपोर्ट प्रमाणपत्र फाइल गर्न आवश्यक छ। केहि अवस्थामा, जस्तै टेक्सासमा, केवल मास्टर LLC मात्र कर रिटर्न फाइल गर्न आवश्यक छ।
साथै, एक होल्डिंग कम्पनीको विपरीत, मास्टर LLCले आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्न र आय उत्पन्न गर्न सक्छ। यसले यसको परिचालन सम्झौताको सर्त भित्र प्रत्येक श्रृंखलाको विकासलाई प्रत्यक्ष रूपमा पनि मद्दत पुर्याउन सक्छ।
एक सीरीज LLC को लाभ?
माथि देख्दा, सीरीज LLC को एक स्पष्ट लाभ यसको श्रृंखला को अन्य श्रृंखला को देनदारियों, या यहां सम्म कि मास्टर LLC को देनदारियों देखि प्रत्येक को सम्पत्ति को रक्षा गर्न को क्षमता हो। यद्यपि यस फाइदाको बारेमा एक चेतावनी छ। सीरीज LLC प्रबन्धकहरू प्रत्येक श्रृंखलालाई अलग-अलग र मास्टर LLC अन्तर्गत अन्य श्रृंखलाबाट अलग राख्नको लागी ख्याल राख्नु पर्छ। श्रृंखला लागतहरू र भुक्तानीहरू साझेदारी गर्न सकिन्छ, तर खाता लेखांकन, बैंक खाताहरू वा अन्य समान कागजातहरू होइनन्। त्यसो गर्दा सीमानाको पर्खालले कानुनी चुनौतीमा उल्लङ्घन गर्न सजिलो बनाउनेछ।
SLLC को एक अन्य लाभ यसको अविश्वसनीय लचीलापन हो। मास्टर LLC भित्र एक श्रृंखला यसको आफ्नै सदस्य, उद्देश्य, र सुरक्षा रुचि हुन सक्छ। यसले पेटेंट र बौद्धिक सम्पदा सहित विभिन्न प्रकारका ठोस र अङ्गनीय सम्पत्तिहरू स्वामित्व, अधिग्रहण वा बेच्न सक्छ। एक श्रृंखलामा सम्पत्ति सीरीज मध्ये वा मास्टर LLCको नाममा राख्न सकिन्छ। कसैले गोपनीयताको लागि एक उम्मेदवार प्रबन्धक चयन गर्न सक्छ। यसको अतिरिक्त, मालिक LLC रचनाकारहरूले आफ्नो सञ्चालन सम्झौताको ढाँचामा अनुबंधको लगभग पूर्ण स्वतन्त्रताको आनन्द लिन्छन्। यस प्रकार, सीरीज LLC कानूनी कानुन भित्र, व्यक्तिगत र अनौठो रूपमा हुन सक्दछ किनभने यसको रचनाकारहरूले यसलाई कल्पना गर्न सक्छन्।
कर र औपचारिकताहरु को रूप मा, कर्पोरेट रेकर्ड को बनाए राखन को रूप मा, एक सीरीज LLC को सहायक संग निगम को तुलना मा एक कम जटिल संरचना छ। यसको कारण, तिनीहरू रन र व्यवस्थापन गर्न सजिलो छ। केहि राज्यों मा, एक सीरीज जो एक श्रृंखला सीरी मास्टर LLC को अन्य श्रृंखला मा भुगतान गर्छ टैक्स छूट हुन सक्छ। र, जबसम्म लेखांकन र बैंक खाताहरू रेकर्डहरू अलग-अलग रूपमा राखिएका छन्, सीरीज सामूहिक रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, जसले थप बचतको लागि नेतृत्व गर्न सक्छ।
सीरीज LLC हानिकारक
यसको फायदाहरूको बावजूद, एक आश्चर्य लाग्यो किन किन श्रृंखला LLCहरू केवल राज्यको एक मुट्ठीमा पहिचान गरिएको छ। एक सीरीज LLC को एक प्रमुख दोष यसको निहित संरचना को untested कानूनी प्रभाव मा छ। एक सापेक्ष नयाँ साधन हुन, यो सँग लामो लामो सल्लाह लिने मिति छैन। यसको दायित्व सुरक्षा सुविधाहरूको बल विस्तारित परीक्षण गरिएको छैन - र अमेरिकी कानूनी प्रणाली भित्र लगातार प्रभावकारी पाइन्छ। त्यहाँ बस पर्याप्त अदालतमा दायर गरिएको छैन कि आधारभूत प्रश्नहरू र चिन्ताहरूमा जवाफहरू (कानुनी प्रस्तावहरू) उपज गर्ने। उदाहरणका लागि, एक गैर-सीरीज एलएलसी राज्यमा अदालतले समान मास्टर LLC अन्तर्गत श्रृंखलाबद्धतासँग दायित्व विभाजनलाई स्वीकार गर्नेछ? त्यहाँ पर्याप्त कानुनी पूर्ववर्तीहरू मात्र जाने छैन।
यसको अतिरिक्त, यसो भन्छ कि SLLC ढाँचालाई मान्यता दिईएको उपकरणले उपकरण नियन्त्रण गर्ने नियमहरू देखाउँछ। केहि राज्यों जस्तै इलिनोइस को श्रृंखला सीएल निर्माताहरु लाई एक नियम को कठोर सेट को पालन गर्न को आवश्यकता हो। अन्य राज्यों, जस्तै डेलावेयर, एक कम कठोर गठन प्रक्रिया को पालन गर्नुहोस। असमानतालाई, अधिक अत्यावश्यक श्रृंखला LLC ले सेट अप एक राज्यमा सीरीज LLC गठन भएको अखंडता को पहिचान गर्दछ जुन नियमहरूको समान सेट को सदस्यता नगर्ने हो? यस समयमा, जवाफ स्पष्ट छैन।
त्यहाँ कर क्षेत्र मा श्रृंखला श्रृंखला को आसपास अनिश्चितता पनि छ। कर सलाहकारहरू अझै थाहा छैन कि तिनीहरू एक राज्यबाट कर उद्देश्यका लागि कसरी अर्कोसँग व्यवहार गरिनेछ। यसैले, धेरै ग्राहकहरु लाई श्रृंखला LLC को सिफारिश को बारे मा सावधान रहन। आईआरएसले अझैसम्म SLLCs मा कुनै निश्चित नियमहरू जारी गरेको छैन। यसले गर्दा, सीरीज LLC हरू मात्र एक बोल्ड र निडर प्रयोग हुनेछ एक साधन रहनेछ। कुनै व्यापार वा सम्पत्ति मालिक आईआरएस द्वारा फ्लैट-पाद पकड्न चाहँदैन। राज्य र आईआरएस श्रृंखला LLC को सन्दर्भमा स्पष्ट गरेर निर्देशन लागू नगरे सम्म, कर विशेषज्ञहरूले यो साधनलाई हातको लम्बाइमा राखे।
सीरीज LLC सिर्जनाकर्ताहरूले बैंकको प्रतिरोधको पनि केहि निश्चित रकम सामना गर्न सक्दछन् जब एक मास्टर LLC अन्तर्गत विभिन्न श्रृंखलाको खाताहरू खोल्दै। केही बैंक वा उनीहरूको कानुनी विभागहरू सीरीज LLC को भित्ता कामका साथ परिचित छन्। यसको कारणले, उनीहरूले अतिरिक्त आवश्यकताहरू वा अधिक कठोर कागजातहरू SLLC सिर्जनाकर्ताहरूबाट लागू गर्न सक्छन्। एक श्रृंखलाको लागि ऋण सुरक्षित पनि एउटै कारणको लागि अधिक जटिल र थोरै साबित हुन सक्छ।
सीरीज LLCहरू उपयोगी उपकरण हुन्। तिनीहरूले सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गर्छन, एक सरल अझै सम्म प्रभावकारी ढाँचा छ, र अत्यन्त लचिलो छ। तिनीहरू रचनाकारहरू र एक विस्तृत रेंज विकल्पहरू जसलाई स्थापना, बढ्दै, र उनीहरूको चासोहरूको रक्षा गर्न सदस्यहरू प्रदान गर्छन्। एक सीरीज LLC एक होल्डिंग कम्पनी को तहत एकाधिक LLC को रूप मा त्यहि लाभ उठाउन सक्छ। किनकि LLC हरू अपेक्षाकृत नयाँ यंत्र हुन्, तथापि, उनी अझै पनि कानूनी क्षेत्रमा अनुपस्थित छन्। यो यसको मुख्य कमजोरी हो। यसबाहेक, अहिलेसम्म SLLC हरूबारे आईआरएस वा राज्य सरकारहरू द्वारा जारी गरिएको कुनै स्पष्ट कर निर्देशन निर्देशन छैन। यसले उनीहरूलाई आफ्ना ग्राहकहरूलाई सिफारिस गर्न चाहने कर सल्लाहकारहरू बनाउँछ। सबैभन्दा बढी भागको लागि, सीरीज LLC सम्पत्ति संरक्षण संसारमा अज्ञात क्षेत्र बनी रहेको छ। यसैले सर्वोत्तम सल्लाह, सावधानी संग अगाडी बढ्नु र क्षेत्र मा एक विशेषज्ञ को मार्गदर्शन को खोज गर्न हुनेछ।